लागि तयार छैन एक गम्भीर सम्बन्ध छ । अब के
त्यसैले, तपाईं एक मान्छे भेट र तपाईं छन् महसुस राम्रो मा उहाँलाई । तपाईं खर्च समय सँगै र महसुस झिल्काहरू उड । अब तपाईं आवश्यक एक दुर्घटना पाठ्यक्रम मा गूढ मृत भाषाहरू किनभने उहाँले बस तपाईं भन्नुभयो उहाँले छैन एक गम्भीर सम्बन्ध लागि तयार छ । खैर, बहिनी, म त्यहाँ भएको छ, र म तपाईं बताउन गइरहेको छु के यो साँच्चै अर्थ,»लागि तयार एक गम्भीर सम्बन्ध छ ।»यो सुरक्षित छ ग्रहण गर्न नौ पटक बाहिर,»म छु छैन एक गम्भीर सम्बन्ध लागि तयार छ», राम्रो रूपमा अनुवाद,»म छु छैन एक गम्भीर सम्बन्ध लागि तयार तपाईं संग छ ।»जब एक मानिस पाता एक महिला, उहाँले पागल छ बारे, उहाँले लिन चाहनुहुन्छ हुनेछ उनको बजार बन्द. उहाँले के छैन, यस को लागि एक केटी उहाँले सुन्दर मनतातो लागि भावना छ । के तपाईं को दुई मा जाने वास्तविक मिति. त्यो समय धेरै खर्च आफ्नो फोन मा गर्दै छन् जब तपाईं सँगै? बैठक माथि र अधिक र अधिक पल्ट (र खर्च कम र कम समय ढाकिएको) को घन्टा बीच मध्यरात र एक.
? लिन एक हार्ड नजर मा उहाँले गरिरहेको छ के, र तपाईं, हुनेछ छ के बुझ्न, उहाँले साँच्चै छ भन्दै । यदि यो आवाज जस्तै आफ्नो मान्छे, त्यसपछि तपाईं केही विकल्प बनाउन छ । भनेर बुझ्न यो मान्छे जा छैन एक दिन उठ र निर्णय तपाईं आफ्नो सपना को केटी. जला को आफ्नो प्रतिलिपि»कुनै तार संलग्न.»यो छ छैन छैन के गर्न जा मा वास्तविकता छ । कुराहरू पालन आकस्मिक सम्म यो मान्छे पाता एक महिला, उहाँले चाहनुहुन्छ एक गम्भीर सम्बन्ध संग, त्यसपछि यो रमाइलो के को लागि यो छ । यदि हुनुको विकल्प गर्दैन ध्वनि आकर्षक, तपाईं गर्न स्वतन्त्र महसुस जमानत । कुनै व्याख्या आवश्यक छ । तपाईं चोट जा छैनन्, आफ्नो भावना, र तपाईं शायद स्पेयर आफ्नो भावना केही तल लाइन छ । तपाईं तिनीहरूलाई कटौती गर्न एक सानो सुस्त । केही मान्छे हो, साँच्चै भइरहेको निष्कपट जब तिनीहरूले बताउन एक महिला तिनीहरूले तयार छैनन् गर्न को सम्झौता छाप । यी मान्छे योग्य एक औंठी छ । एक मानिस जो भइरहेको छ, साँचो आफ्नो भावना बारेमा शायद तपाईंलाई बताउन सुरु देखि उहाँले तयार गर्न प्रतिबद्ध छ । यो तपाईं दिन्छ विकल्प बाहिर फिर्ता भएका अघि कुनै पनि रोमान्टिक भावना छ । गरे उनले अनुभव एक प्रमुख जीवन परिवर्तन, जस्तै आमाबाबु, पेसा वा को अर्को गम्भीर सम्बन्ध? छ तपाईं खर्च समय सँगै गुणवत्ता समय छ । आफ्नो मान्छे चिन्न सक्छ उहाँले छ कि छैन स्थिति दिन तपाईं के तपाईं योग्य मा एक सम्बन्ध छ । यो आफ्नो तरिका को दिँदै तपाईं भनेर थाह छ । यो छडी संग बाहिर यो मान्छे को लागि एक नगरिएको समय को राशि (यो हुन सक्छ, हप्ता, महिना वा वर्ष), यो अडिग बाहिर सम्म उहाँले लागि तयार छ एक गम्भीर सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने लामो प्रतीक्षा. हामी सबैभन्दा कि खेल हो डेटिङ खेल लागि देख छैन पेन पाल वा नयाँ सबै भन्दा राम्रो कली । हामी गर्न खोजिरहेका छन्, एक जडान बनाउन छ जो कसैले संग नै पृष्ठ मा हामीलाई रूपमा.
यसबाहेक, पनि जब उहाँले तयार छ, त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छ
यो तपाईं हुनेछ केटी उहाँले चाहनुहुन्छ संग एक सम्बन्ध छ । पछि एक मानिस तपाईं बताउँछ उहाँले एक गम्भीर सम्बन्ध लागि तयार, आफ्नो अर्को कदम आधारित हुनुपर्छ चाहनुहुन्छ के छ । व्यक्तिगत, थाह मेरो पेय मा हो मान्छे ट्याब, ऊर्जा वा प्यारा संगठनों गर्न वरिपरि प्रतीक्षा छ. एक मान्छे को लागि कोठा बनाउन, मेरो लागि आफ्नो जीवन । भने एक मान्छे तयार छैन एक गम्भीर सम्बन्ध लागि. केहि भने, यो उहाँलाई बनाउँछ एक धेरै राम्रो मान्छे भएकोमा खुला र कम से कम केहि पारदर्शी संग आफ्नो भावना छ । पनि तयार छैन वा खोजिरहेको एक गम्भीर सम्बन्ध, यो हुन सक्छ एक खेलमा मा निर्मित आकस्मिक डेटिङ स्वर्ग । तथापि, लागि आशा अधिक केहि, डाली कि सानो फिर्ता र हुक जसले एक छ गर्न सक्षम लिनु दिनु.
म हुँ एक -केही व्यावसायिक जीवित र मायालु मा यो जर्सी शोर
म सधैंभरि गर्न प्रयास गरिएको सन्तुलन मेरो दुई कमजोरी जीवन: खाना र मानिसहरू । सही बदल पहिले, ठाडो बाहुला — एक कि वजन हानि सर्जरी को राशि सीमा म खाना खान सक्छन्, एक समय मा. म हराएको छु एक पूर्ण पाउण्ड त्यतिबेलादेखि राखिएको र हरेक औंस को यो बन्द छ । म अझै के कुनै विचार छ के गर्न बारेमा मानिसहरू । म भएको छु डेटिङ संग एक विश्वास गर्न सक्छन् भन्ने मात्र रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ धार्मिक लागि एक दशक भन्दा बढी छ । मलाई विश्वास जब म तिमीहरूलाई भन्दछु. हुँदा म बुझे थियो बिल्कुल कुनै अन्य तार्किक व्याख्या लागि मेरो विचित्र डेटिङ जीवन त्यो भन्दा बढी म पर्छ अरूलाई, र म छानिएन छु केही ठूलो सल्लाह साझेदारी गर्न बाटो साथ । यो हुन सक्छ लोकप्रिय राय छ, तर म प्रतिज्ञा तपाईं हरेक शब्द को यो साँचो हो । ट्विटर मा. डेटिङ सल्लाह को एक संग्रह छ डेटिङ विशेषज्ञहरु गर्ने बाँड्ने बुद्धि मा ‘सबै कुराहरू डेटिङ’ दैनिक. ठूलो प्रयास भएका छन् कायम गर्न विश्वसनीय डाटा मा सबै प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यो डाटा प्रदान गरिएको छ. प्रयोगकर्ता सधैं जाँच प्रस्ताव प्रदायक आधिकारिक वेबसाइट लागि हालको सर्तहरू र विवरण छ । हाम्रो साइट देखि क्षतिपूर्ति प्राप्त को धेरै प्रदान गर्दछ, साइट मा सूचीबद्ध छ । साथ कुञ्जी समीक्षा कारक, यो क्षतिपूर्ति प्रभाव पार्न सक्छ कसरी र कहाँ उत्पादनहरु देखा साइट मार्फत (सहित, उदाहरणका लागि, क्रम मा जो तिनीहरूले देखा). हाम्रो साइट समावेश गर्दैन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को उपलब्ध प्रदान गर्दछ. सम्पादकीय राय व्यक्त साइट मा कडाई हाम्रो आफ्नै र प्रदान छैन, पारित, वा विज्ञापनदाताहरु द्वारा अनुमोदित छ ।
कामकाज डेटिङ, सेक्स र डेटिङ विवाहित डेटिङ देखि वैवाहिक कामकाज →